FT NIR Instrument Product PresentationHD 1080P
𝐏𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐞𝐮𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥, 𝐅𝐨𝐨𝐝 & 𝐁𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞, 𝐂𝐡𝐞𝐦𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐦𝐞𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬 တွေမှာ ကုန်ကြမ်း၊ကုန်ချော တွေရဲ့ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐬 တွေကို 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 & 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬 နှစ်ခုလုံး တိုင်းတာပေးနိုင်တဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐳𝐞𝐫 တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 𝐀𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐈𝐈 𝐅𝐓-𝐍𝐈𝐑 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐳𝐞𝐫 အကြောင်းလေးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်
- 𝐔𝐒 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 ကိုအခြေခံပြီး 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐦𝐨 𝐅𝐢𝐬𝐡𝐞𝐫 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 ကနေ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 ဖြစ်ပြီးတော့ တိကျ၊ မှန်ကန်၊ မြန်ဆန်ပါတယ် 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲ပိုင်းမှာလဲ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
- ဒီလို တိကျ၊ မှန်ကန်၊ မြန်ဆန်ပြီး အရည်အသွေးပိုင်းမှာလဲ စိတ်ချရတဲ့ 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐢𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐍𝐞𝐚𝐫-𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫လေးရဲ့အကြောင်းကို အောက်ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရူပေးကြပါရှင်။
3500 Series Genetic Analyzer (or)Capillary Electrophoresis Instrument
Thermo Fisher Scientific အောက်မှာရှိတဲ့ Applied Biosystems ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ 3500 Series Genetic Analyzer (သို့)Capillary Electrophoresis Instrument for Sanger Sequencing, fragment Analysis and Human Identification.
ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့Sample တစ်ခုရဲ့ gene တစ်ခုမှာရှိတဲ့ nucleotides တွေ တစ်ခုချင်းစီဘယ်လိုအစီစဉ်နဲ့ရှိနေလဲဆို တာကိုသိနိုင်ဖို့လေ့လာတဲ့နေရာမှာ DNA Sequencing [Sanger Method] ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
DNA Sequencing နည်းပညာသည်
ဇီဝဗေဒသုတေသနလုပ်ငန်းများအပြင် ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ အမျိုးမျိုးသော ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းသာမက မှုခင်းဆိုင်ရာ ဇီဝဗေဒပညာရပ်တွေအတွက်ပါ မရှိမဖြစ်အဓိကအရေးကြီးသော အခန်းဂဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုAdvance ဖြစ်တဲ့နည်းပညာတွေလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်Instrument အနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချပြီး ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Thermo Fisher Scientific အောက်မှာရှိတဲ့Applied Biosystems ကထုတ်တဲ 3500 Series Genetic Analyzers များကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။
ဒီ 3500 Genetic Analyzer Instrument ရဲ့အားသာချက်များကတော့ -
၁။ 3500 Series မှာ 3500 System (8 capillary )နဲ့ 3500 XL(24 capillary)ဆိုပြီးစက်နှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့Sample အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်သည့် စက်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊
၂။ စက်တွင်အသုံးပြုသည့်Laser အနေဖြင့်
ရေ ရှည်ခံသည့် Single-Line 505nm Solid State Laser ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရေရှည်အတွက်စိတ်ချရပြီး၊Laser အတွက်အအေးခံစနစ်ထပ်မံမလိုအပ်ဘဲအခန်းတွင်းရှိ air-con temperature ဖြင့်သာ instrument အားယုံကြည်စိတ်ချစွာထားရှိနိုင်ခြင်း၊
၃။Data collection နှင့် primary analysis software ကိုထည့်သွင်းပေးထားခြင်းကြောင့် အလွယ်တကူ plate setup လုပ်နိုင်ပြီး၊ run ပြီးသည့်အချိန်တွင်လည်းကိုယ့်ရဲ့data quality ကိုလည်းပြန်ပြီး အကဲဖြတ်ကြည့်ရှု့ နိုင်ခြင်း၊
၄။FRID (Radio Frequency Identification )technologyဖြစ်သည့်အတွက်ကိုယ်အသုံးပြုမည့်consumables များရဲ့ expired date,lot no, initial installation date,sample remaining နှင့် injection remaining များအခြေအနေကိုလည်း software ၏ main Dashboard တွင်အလွယ်တကူကြည့်ရှု့နိုင်ပြီး record လုပ်ပေးထားနိုင်ခြင်း၊
၅။DNA Fragment analysis Application များအတွက် Instrumentတွင် six dyes အထိအချိန်မရွေး dye installation လုပ်ထားနိုင်ခြင်း၊
၆။ Instrument ၁ခုအတွင်းတွင်applicationအနေဖြင့် Sequencing , Fragment နှင့် Human Identification (HID) သုံးခုစလုံး run နိုင်ခြင်း၊
၇။Maintenance လုပ်ရာတွင် လုပ်ရမည့်Schedule များကို Software တွင်အလွယ်တကူကြည့်ရှု့နိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊
၈။Micro SEQ identification နှင့် Forenisc applicationများအတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရထားပြီးဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ဒီ instrument နှင့်ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊
စသောအကြောင်းအရင်းများကြောင့် Applied Biosystems ကထုတ်တဲ့ဒီ instrumentလေးရဲ့ အကြောင်းကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်ရှင်၊အချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုသူများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီ Instrument နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ထပ်မံသိရှိလိုသည်များရှိပါက Delta Science Co., Ltd ၏ Facebook page Messenger မှနေ၍
The all-in-one Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system is specially designed for fast and convenient benchtop system, from DNA sample loading to gel image.
With dry precast E-Gel agarose gel technology, you can get the result as little as 10 minutes and observe separation in real time.
#𝑺𝒎𝒂𝒍𝒍 , 𝒇𝒂𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓𝒇𝒖𝒍
Applied Biosystems Proflex PCR System Product Introduction
Molecular Lab တော်တော်များများမှာရှိတဲ့ PCR Laboratoryတွေရဲ့ PCR Amplify လုပ်တဲ့နေရာမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ PCR Thermal Cycler (or) PCR Machine လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။
အဲဒီ PCR Thermal Cycler လေးကတော့ ThermoFisher Scientific အောက်မှာရှိတဲ့ Applied Biosystems ရဲ့ Proflex PCR System လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
- Interchangeable block type ဖြစ်သည့်အတွက် block type ကိုပြောင်းလဲချင်လျှင် အလွယ်တကူပြောင်းလဲတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း၊
- Veriflex block type (5)မျိုးရှိသည့်အတွက် ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် block type ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး PCR Optimization အတွက်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
- Touch screen အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး user အနေဖြင့် လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊
- Cloud-enabled ဖြစ်သည့်အတွက် instrument နှင့် connect လုပ်ထားပြီး mobile application အသုံးပြု၍ မည်သည့်နေရာမှမဆို မိမိရဲ့ running profile status ကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊
- တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မတူညီတဲ့ experiments သုံးခုကိုတပြိုင်နက်တည်း setup လုပ်ပြီး runနိုင်ခြင်း စသည့်အကြောင်းရင်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ instrument နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Video လေးကိုလည်း ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါရှင်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Introduction of EDIBON
[ 21/11/2020 12:56 PM ] .: 𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡
ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼.,𝗟𝘁𝗱 ရဲ့ 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 ဆိုတာကတော့ စပိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 ဖြစ်ပြီး 𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 နယ်ပယ်မှာ 𝘁𝗵𝗲𝗼𝗿𝘆 ပိုင်း 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 ပိုင်းတွေအတွက် လက်တွေ့သင်ကြားပေးလို့ရတဲ့
𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 & 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 တွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 ပဲဖြစ်ပါတယ်။
𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 မှာ 𝘂𝗻𝗶𝘁𝘀 ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀, 𝗩𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗲𝘀 & 𝗢𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 𝗔𝗿𝗲𝗮 စတဲ့ 𝗱𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 အလိုက် လက်တွေ့ခန်းသုံး 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 များကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 အနေဖြင့် 𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 ကို 𝟮𝟬𝟭𝟴 မှ စတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏တစ်ဦးတည်းသောကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ တင်သွင်းဖြန့့်ချိ ရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့တင်ပြဆွေးနွေးမဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ 𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 ဟာဆိုရင်...
-𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 ကိုတော့နည်းပညာတက္ကသိုလ် ၊ သင်ကြားရေးနှင့်သုတေသနဌာန နေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹,𝗠𝗲𝗰𝗵𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹,𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰,𝗠𝗲𝗰𝗵𝗮𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰, 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 နဲ့ 𝗖𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 ဌာနတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
-𝗘𝗗𝗜𝗕𝗢𝗡 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 ကို ဆရာ/ဆရာမများမှ ကျောင်းသား/သူများအား𝘁𝗵𝗲𝗼𝗿𝘆 ပိုင်းနဲ့ 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 ယှဉ်တွဲသင်ကြားပေးတဲ့အခါ 𝘁𝗲𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို အချိန်ပေးပြီး ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါကြီးမှ လဲ ကင်းဝေးကြပါစေကြောင်း ကျွန်တော်တို့ 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 မှနေပြီး ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်
𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ထပ်မံအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼., 𝗟𝘁𝗱 ၏ 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗣𝗮𝗴𝗲 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿 မှလည်းကောင်း ၊ 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 ၏ 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 တွင်လည်းကောင်း၊ အောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
𝗬𝗮𝗻𝗴𝗼𝗻 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲
+𝟵𝟱 𝟵 𝟰𝟱𝟰 𝟭𝟵𝟯𝟴𝟮𝟵
+𝟵𝟱 𝟵 𝟲𝟴𝟳 𝟬𝟯𝟴𝟭𝟬𝟰
𝗠𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗮𝘆 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗰𝗵 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲
+𝟵𝟱 𝟵 𝟴𝟵𝟱 𝟬𝟳𝟭𝟬𝟮𝟯
E Gel Imager Instrument Detail Product Presentation
ယခုတင်ဆက်ပေးမယ့် 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁 လေးကတော့ 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵, 𝗙𝗼𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝗰 , 𝗔𝗴𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗩𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵, 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘁𝗶𝗰𝘀 နဲ့ 𝗟𝗶𝗳𝗲 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗔𝗿𝗲𝗮 တွေမှာ 𝗠𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗕𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 အနေနဲ့ 𝗡𝘂𝗰𝗹𝗲𝗶𝗰 𝗔𝗰𝗶𝗱 နဲ့ 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗶𝗻 တွေရဲ့ 𝗚𝗲𝗹 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ကို 𝗜𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ 𝗘𝗴𝗲𝗹- 𝗚𝗲𝗹 𝗗𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ 𝗠𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗳𝗹𝗼𝘄 လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် 𝗙𝗹𝗲𝘅𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...
𝗘𝗴𝗲𝗹 𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲𝗿 တစ်ခုမှာ 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗛𝗼𝗼𝗱 နဲ့ 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗕𝗮𝘀𝗲 တစ်ခု ပါရှိပြီးတော့-
၁။ 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗵𝗼𝗼𝗱 မှာ 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮 ပါတဲ့အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပုံများကို ထင်ရှားပြတ်သားစွာ မြင်နိုင်ခြင်း၊
၂။ သုံးရတာလွယ်ကူပြီး သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် ရရှိနိုင်ခြင်း၊
၃။ 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 𝘀𝗮𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 ဖြစ်ခြင်း၊
(ရွေးချယ်စရာ 𝗕𝗮𝘀𝗲 ၃မျိုး ရရှိနိုင်ပြီး )
၁။ 𝗦𝗬𝗕𝗥 𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻 တွေမှာပါသုံးနိုင်တဲ့ 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗕𝗮𝘀𝗲
၂။ 𝗘𝘁𝗕𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻 𝗴𝗲𝗹 တွေအတွက် အကောင်းဆုံးမြင်နိုင်တဲ့ 𝗨𝗩 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗕𝗮𝘀𝗲 နှင့်
၃။ 𝗚𝗲𝗹 𝗗𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 များကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ 𝗘𝗴𝗲𝗹 𝗮𝗱𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝗕𝗮𝘀𝗲 ဆိုပြီးရရှိနိုင်ပါတယ်..
*အကောင်းဆုံး 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗲 ကို ရရှိနိုင်ဖို့ 𝗳𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿 ရွေးချယ်မှုကလည်းအရေးကြီးပါသေးတယ်..
*𝗙𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿 အနေနဲ့ ရွေးစရာ ၃မျိုးရှိပါတယ်...
𝟭. 𝗦𝘁𝗮𝗶𝗻 အမျိုးမျိူးကို 𝗕𝗮𝘀𝗲 ပေါ်မူတညပြီး သုံးနိုင်တဲ့ 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗳𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿 𝟮. 𝗦𝗬𝗕𝗥 𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻 တွေအတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗙𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿 𝟯. 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပုံတွေ ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆို 𝗜𝗻𝘃𝗶𝘁𝗿𝗼𝗴𝗲𝗻 𝗠𝗼𝗹𝗲𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗣𝗿𝗼𝗯𝗲𝘀 𝗤𝗱𝗼𝘁 𝟲𝟮𝟱 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗲 နဲ့ပေါင်းပြီးးသုံးနိုင်တဲ့ 𝗘𝗴𝗲𝗹 𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗤𝗱𝗼𝘁𝟲𝟮𝟱 𝗙𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿 ဆိုပြီးရရှိနိုင်ပါတယ်...
*𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗶𝗻 𝗴𝗲𝗹 𝘃𝗶𝘀𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 တွက်ဆို 𝗨𝗩 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗕𝗮𝘀𝗲 သို့မဟုတ် 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗕𝗮𝘀𝗲 ကို 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗲𝗻 သုံးပြီးမြင်နိုငိပါတယ်..
ထိုသို့သောအကြောင်းအရင်းများအားအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့ ဒီ 𝗘𝗴𝗲𝗹 𝗚𝗲𝗹 𝗗𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (𝗘𝗴𝗲𝗹 𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲𝗿) လေးရဲ့ 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 တင်ဆက်မှုကို ကြည့်ရှုအားပေးပါဦးရှင်....
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨., 𝐋𝐭𝐝 ၏ 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫 မှလည်းကောင်း၊ 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 ၏ 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 တွင်လည်းကောင်း အောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်.......
+𝟵𝟱 𝟵 𝟳𝟵𝟱 𝟵𝟬𝟯𝟴𝟱𝟵
+𝟵𝟱 𝟵 𝟰𝟮𝟬 𝟬𝟮𝟳𝟵𝟴𝟭
+𝟵𝟱 𝟵 𝟮𝟱𝟬 𝟯𝟴𝟱𝟭𝟭𝟱
+𝟵𝟱 𝟵 𝟳𝟵𝟳 𝟳𝟴𝟭𝟬𝟴𝟯